यसकारण रेखा थापा राप्रपामा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
यसकारण रेखा थापा राप्रपामा
मेरो चलचित्रको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने रेखा थापा मञ्चमा उपस्थित हुनुको कारण बताइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विगतका चलचित्र र वर्तमानका चलचित्रले मेरो कामको पुष्टि भइसकेको छ । म कहिले दुर्गा, कहिले काली र कहिले रामप्यारी बनेर अन्याय र अत्याचारविरुद्ध चलचित्रमार्फत आवाज उठाइरहेकी हुन्छु । जब मैले समाजसेवा गर्ने क्रममा मान्छेहरूले मेरो नेतृत्व क्षमता चिनेको मैले महसूस गरें । म विगत चार वर्षदेखि गहिरो अध्ययनमा थिएँ । तपार्इंहरूलाई अहिले आएर लाग्ला, रेखा थापा किन राप्रपामा ?
म एक हिन्दू नारी
म एक हिन्दू नारी हुँ, राष्ट्रवादी केटी हुँ । जबजब धर्तीमा अन्याय र अत्याचार बढ्छ, काली, दुर्गा र देवीको रूप धारण गरेर भगवतीको उपस्थिति हुन्छ । म गर्वका साथ के भन्न सक्छु भने राप्रपा नै मेरो घर थियो । यही नै मेरो विचारको पर्याय थियो । हामी सधैं नयाँ कुरालाई स्वीकारेर उसलाई एकपटक मौका दिने गर्छौं । कुनै बेला देशमा माओवादी जनलहर छाएको थियो । मलाई पनि त्यो लहरमा पसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।
म माओवादी विचारसँग सहमत थिइनँ
धर्म अनुशासन हो । म कलाकार तथा जनता भएको कारणले धर्मको जर्गेना गर्नु मेरो कर्तव्य हो । तपार्इंलाई रेखा थापा माओवादी पार्टीकी सदस्य थिई भन्ने लाग्ला । यदि त्यस्तो भ्रम छ भने म यसभन्दा पहिले कुनै पनि पार्टीमा नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
म सफल कलाकार थिएँ । दर्शकले आशीर्वाद दिएको कलाकारलाई कुनै पार्टीले टिकट दिनु नौलो थिएन । टिकट दिइए पनि मैले माओवादी पार्टीको सदस्यता लिएकी थिइनँ । तपार्इंहरूलाई म अवसरवादी भन्ने लाग्ला । माफ गर्नुहोला, म अवसरवादी होइन । म कुनै पनि हिसाबले माओवादीको विचारसँग सहमत थिइनँ ।
मैले माओवादी पार्टीको सदस्यता लिएकी थिइनँ । राप्रपा मेरो पहिलो पार्टी हो । लाखौं दर्शक, प्रशंसकले मलाई दिएको सुझावलाई मध्यनजर गरेर मैले यो पार्टी चुनेकी हुँ । म किन यहाँ प्रवेश गरें? लोभ लालच या अभिलाषाले पार्टी फेरेको होइन । म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु, म कुनै पनि लोभमा लागेको होइन । म आत्मसन्तुष्टिका लागि राप्रपामा प्रवेश गरेकी हुँ । मलाई पार्टीले कुनै पनि लोभ देखाएको छैन ।
हिन्दू धर्मको सम्मान गर्ने पार्टीमा आएँ
तपाईहरूलाई थाहा छ, म हरेक चाडपर्व, रीतिरिवाजलाई उल्लासका साथ मनाइरहेकी हुन्छु । तीजमा रातो सारी, दशैंमा जमरा र टीका लगाएर मनाउने नारी हुँ म । राप्रपाले हिन्दू धर्मको सम्मान गरेको महसूस गरेर म यो पार्टीमा आएकी हुँ ।
तपाईहरूका अगाडि मैले कुनै सपना बाँड्न सुहाउँदैन । म वरिष्ठ नेताहरूको मार्गदर्शनमा रहेर मैले आफूले सक्दो काम गर्र्ने वाचा गर्न चाहन्छु । पुजारीले मन्दिरमा जाँदा रेखाजी, तपाईँ पनि मन्दिरमा भनेर किन भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । अहिले म बुझ्दैछु त्यसको अर्थ । मन्दिर जानु मेरो अधिकार हो तर किन त्यसो भनिन्छ भन्ने मैले बुझेकी रहेनछु । म पशुपतिनाथमा गएर पूजाआजा गर्छु । बिहानीको शुरूवात धूपबाट हुन्छ । शालीनदीमा गएर जन्मदिन मनाउँछु । हाम्रो धर्मलाई राप्रपाले संरक्षण गरेको छ ।
हामी जसले जे काम गरेपनि हामी सबैमा राष्ट्रियता छ । जब देश संकटमा फस्दै गएको देखें, तब मलाई यो देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पुर्खाले संरक्षण गरेको देश ढल्न लाग्यो भने कसलाई देशका लागि केही गरुँ भन्ने लाग्दैन? मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईहरूले बुझिसक्नुभएको छ ।
यो मेरो पहिलो र अन्तिम पार्टी
म राप्रपामा आउनुको कारण यो पार्टी योग्य र दूरदर्शी हुनु हो । मैले राजनीति बुझेदेखि फिल्मी भाषामा भन्दा म यो पार्टीको ग्रेट फ्यान हुँ । दूरदर्शिता भएका नेता यो पार्टीमा छन् । पूरै देश एउटा रफ्तारमा बगेको बेला हिन्दू धर्मको उहाँहरूले वकालत गर्नुभयो ।
मेरा लागि पहिलो र अन्तिम पार्टी हो राप्रपा । म राष्ट्र र राप्रपाको झण्डा ओढेर मर्न चाहन्छु । म बाँकी समयमा पनि देशको सेवा गरेर मर्न चाहन्छु । १६ वर्षको उमेरबाट एक्लै करिअर थालेर सफल भएझैं भोलि म राजनैतिक करिअरमा पनि मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेकी छु । मेरा लाखौं दर्शक तथा जनता खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेकी छु ।
तपाई सबैको साथको आशा छ । जय राष्ट्रवाद ।
(रेखा थापाले सोमवार पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका दौरान राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश लोकान्तरबाट )